OEM & ODM IKEA Grand Erise Upher Eseresite Njirimara | Rayson
Uwe mmiri na-asọ oyiA na-eji mmiri mmiri na-acha uhie uhie, nke nwere 6cm 3 mpaghara, nke ike dị iche iche n'akụkụ akụkụ ahụ dị iche iche. Okomoko, mara mma, ihe okike a. Hotel matralite e nyere maka iji ụlọ nkwari akụ Start ise. Ọ dị mma maka ụlọ oriri na ọdụ ụgbọ mmiri dị elu. Enwere ike ịhazi nha ọ bụla na usoro.
Iji igwe carbon dị elu, okpukpu abụọ ọkụ, mee ka ọ dịgide karịa oge opupu ihe ubi.
Ngalaba mmiri Bonnell dị elu na-enweghị etiti nwere ike bụrụ oghere nwere oghere ma tụgharịa na akpa PVC
Ọnụahịa ịkwalite bụ ụzọ kachasị mma iji mara uru nke connell matraasi.
Ọ na-agbasi mbọ ike mgbe niile, Rayson etolitela ịbụ onye na-achụ n'ụlọ ahịa na ndị ahịa. Anyị na-elekwasị anya n'ịdị ike nke sayensị na azụmaahịa ọrụ. Anyị edobela ngalaba ọrụ ndị ahịa ka ọ ka mma nye ndị ahịa na ọrụ ngwa ngwa gụnyere ọkwa nsuso. Ikea Garding anyị anọwo na-etinye ego ọtụtụ na ngwaahịa R & D, nke na-eme ka ọ dị irè nke anyị zụlitere IKEAD. N'ịdabere na ndị ọrụ na-arụ ọrụ na ndị ọrụ anyị, anyị na-ekwe nkwa na anyị na-enye ndị ahịa ngwaahịa kachasị mma, ọnụahịa kachasị mma, na ọrụ kachasị mma. Nabata ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla .it ga-etinye ndị na-eyi ya mma. E kwenyere na iyiri ya obi ike na-eme ka ha nwee obi ike ha.